Dowladda Soomaaliya Oo Lagu Eedeeyey Ineysan Dabagelin Kufsi Lagu Heystay AMISOM * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Hay’adda u dooda xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa ku eedeeyey dowladda Soomaaliya ineysan si sax u dabagelin kufsi bishii Agoosto ee sanadkaan lagu eedeeyey in ciidamada AMISOM ka geysteen xaafadda Suuqa Xoolaha ee magaalada Muqdisho.
Human Rights Watch oo fadhigedu yahay dalka Mareykanka ayaa warbixin dhawaan ay soo saartay ku eedeeysay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in aysan sidii la rabay u wajihin baaritaan ku saabsan eed kufsi ah oo bishii August ee sanadkan lagu eedeeyay ciidanka nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
Dhinaca kale, shir ay dhawaan Muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah hay’adaha u dooda xuquuqda Aadanaha ayaa ka hadlay arrintaas waxeyna dowladda ku dhaleeleen In arrinta la xiriirta kufsigaas aan waxba laga qaban.
Kulan ay ka qeybgaleen ilaa 26-qof oo ka mid ururada bulshada rayidka ee Muqdisho ayaa looga dhawaaqay guudi bulshada rayidka ah u saartay arrinta la xiriirta kufsiga loo heysto in ciidamada AMISOM geysteen.
R/wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa horay arrintaan ugu saaray guddi soo bara, hase ahaatee ma jiro wax ay usoo gudbiyeen bulshada Soomaaliyeed.
Raysul wasaaraha Soomaaliya Cabduqaadir Faarax Shirdoon ayaa soo dhoweeyay hadalka kazoo yeeray Human Rights Watch oo ku aaddanaa dhowrista xuquuqda dumarka iyo baaritaan cusub in lagu sameeyo haweeney bishii August ee sanadkan la sheegay in lagu kufsaday Muqdisho.
Cabdi Faarax Shirdoon ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya aysan marnaba aqbali karin kufsiga iyo gabood-fallada lagula kaco haweenka.